Baakado SMT - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Iyada oo waayo-aragnimo ka badan 20 sano in industry this, waxaan ku siin kara xal one-stop loogu talagalay macaamiisha ay ku jiraan been PCB, qaybaha wax soo iibsiga iyo adeegyada Golaha PCB. Ugu wacan tahay sharciyada wax soo saarka adag iyo xeerarka, sii kordhaya aqoonta farsamada iyo xamaasad inay ku Dadaashid farsamooyinka ugu dambeeya, waxaan u ururay awoodaha badan si ay ula noocyada kala duwan ee baakadaha component sida BGA, PBGA, chip Flip, CSP iyo WLCSP ka qabtaan.
BGA, gaaban Roobka kubad soo diyaariyeen, waa nooc ka mid ah SMT (dhulku Mount Technology) xirmo oo la sii kordheysa loo isticmaalay wareeggeedii isku dhafan (ICS). BGA faa'iido u horumar ah ee Alxan halaynta wadajir ah.
BGA muujinayaa faa'iidooyinka soo socda:
• codsiga si hufan loo meel PCB
BGA meelaha xirmo xiriir smd dureeri (dhulku Mount Device) xirmo halkii ku hareeraysan si bannaan in loo inta badan badbaadi kara.
• Hagaajinta marka la eego waxqabadka kaamerada iyo korontada
Tan iyo xirmo BGA ka caawisaa si loo yareeyo inductance diyaarado xoog iyo dhulka iyo impedance khadadka signal gacanta, kulaylka laga gashto iska dhaqaajin karin, faa'iido u kululeeyo dhereg badan.
• Kordhi ee wax-soosaarkooda saarka
Wacan tahay horumarka ee isku halaynta Alxan, BGA joogteyn karto boos weyn u dhexeeya xidhiidhada iyo kabida oo tayo sare leh.
• Xidhmada hoos dhumucdiisuna
Waxaan ku takhasusay taabato wanaagsan shirkii qaybaha garoonka iyo ilaa hadda aan la BGAs kuwaas oo garoonka ugu yaraan noqon kartaa u duqeeyey sida 0.35mm ka qaban karin.
Marka aad meel u xirmo buuxda jeedin-muhiimka ah si ay shirka PCB saabsan BGA, injineerada our, ugu horreeya oo dhan, wuxuu hubin doonaa files PCB iyo Xogeedka BGA si ay u soo koobaan profile ah kaamerada, kaas oo xubno ka waa in la tixgeliyaa sida size BGA , wax kubad iwm hor tallaabo this, waxaan hubin doonaa design PCB aad u BGA iyo siin ah jeeg FREE DFM in laga war hayo xubno muhiim u ah shirka PCB oo ay ku jiraan waxyaabaha substrate, dusha ku dhameystaan, ansixin soldermask, iwm
Sababo la sifooyinka of xirmo BGA, Automated indhaha Inspection (AOI) ku guuldareysto inuu la kulmo baahida kormeerka. Waxaan sameeyaan kormeerka BGA by Automated X-ray Inspection (AXI) Qalabka awood kormeer cilladaha kabida, marxalad hore ka hor saarka mugga.
PBGA, gaaban caag Roobka kubad soo diyaariyeen, waa mid ka mid ah foomamka Baakadaha ugu caan ah oo dhexdhexaad ah si heer sare-I / qalabka O. Iyada oo ku xidhan substrate laminate taas oo ka kooban layers copper dheeraad ah gudaha, PBGA faa'iido u dhereg badan iyo kulaylka tiraan kartaa in tirada jirka ka weyn iyo tirada kubadaha si ay u la kulmaan kala duwan ee looga baahan yahay.
PBGA muujinayaa faa'iidooyinka soo socda:
• Baahan inductance hooseeyo
• Samaynta dusha Buur fudud
• kharashka yar
• Joogtaynta isku halaynta sare
• Yaraynta arrimaha coplanar
• Helitaanka heer sare-xad-qabadka kaamerada iyo korontada
Sida hab ka mid ah xiriir korontada, chip flip xira dhiman iyo substrate xirmo by si toos ah hoos u jeeda IC si uu ugu caddeeyo waxa ku lifaaqan substrate, guddiga circuit ama side. Mudnaanta chip flip ka mid ah:
• Yaraynta inductance signal iyo awood / inductanc dhulka
• La dhimo tirada biinanka xirmo iyo size of dhinta
• Kordhinta cufnaanta signal
CSP iyo WLCSP
Illaa iyo hadda, CSP waa nooc ugu dambeeyay ee xirmo, gaaban xirmo qiyaasta chip. Sida sharaxaad ka magaceedii waxay muujinaysaa, CSP loola jeedaa xirmo ah oo size ay la mid tahay in jab ah cilado ku saabsan chips dhashay reebay. CSP bixisaa xal baakada waa denser oo fudud, jaban oo dhakhso ah. Iyo sifooyinka soo socda ee CSP caawiya keeni sii kordhaysa ee wax-soosaarkooda shirka iyo hoose kharashka wax soo saarka.
CSP waa sidaas oo caan ah oo hufan in industry this in ilaa hadda waxaa jira in ka badan 50 nooc oo CSP ay qoyska iyo tirada uu weli sii kordhaya maalin kasta. Dad badan oo sifooyinkaa iyo muuqaalada CSP waa contributive si ay caan u ballaaran ee arimahan:
• Dhimista of size xirmo
CSP heli kartaa hufnaanta baakadaha ah u sarraysaa sida 83% ama in ka badan, wayn cufnaanta kordhaya wax soo saarka.
• Self in lays
CSP waa awood isku waafaqsan habraaca ku reflow shirka PCB si ay u dhigaysa SMT fudud.
• La'aanta raadad xodan
Haddii aan ka qayb of raadad laaban yihiin, arrimaha coplanar waxaa si weyn hoos loogu dhigi karaa.
WLCSP, gaaban xirmo qiyaasta heerka canjeero chip, waa nooc ka dhabta ah ee CSP tan iyo markii ay xirmo dhammeeyayna ay muujinayaa size chip-miisaan. WLCSP loola jeedaa technology Baakadaha IC heer xabbad canjeero ah. qalab A la WLCSP run ahaantii waa dhinta on taas oo soo diyaariyeen ah ee kuuskuus ama kubadaha Alxan waxaa loo qabanqaabiyaa at garoonka I / O ah, kulan looga baahan yahay geedi socodka shirka guddiga circuit dhaqanka.
Faa'iidooyinka WLCSP ugu horayn waxaa ka mid ah:
• Inductance ka dhiman in PCB waa yar;
• size ee Xidhmada waxa aad u yaraynaya la degree cufnaanta hagaagay;
• waxqabadka tabinta kulul waa wayn u xoojinaya.
Illaa hadda, waxaan awood u qabashada WLCSP kuwaas oo labada ugu yar gudahood-Die garoonka iyo Guud-Die garoonka gaari karaan 0.35mm.
0201 iyo 01005
Sida suuqa electronic iyo waxyaabaha ka hor, arrimuhu sii kordhaysa ee miniaturization ee taleefannada gacanta, laptops iwm waxaa si joogto ah wadista ah ee ka kooban la tirada yar. In si ay u la shaqeeyaan habkani, waxaana lagu dadaal si loo kordhiyo awoodooda shirka ka kooban ilaa 0201 iyo 01005.
Illaa iyo hadda, labada 0201 iyo 01005 waa mid aad loo jecel yahay suuqa electronic ay sabab u tahay faa'iidooyinka soo socda:
• size yaryar oo iyaga arrin soo dhaweynayaa in wax soo saarka dhamaadka meel-fuulaan;
• waxqabadka ugu wanaagsan ee looga gol leeyahay ka shaqeynayaan of waxyaabaha elektarooniga ah;
• socon leh baahida cufnaanta sare ee alaabta elektaroonik ah oo casri ah,
• Arjiyada-xawaaraha sare Aad.
Si loo gaaro awoodaha shirka ee 01005, waxaana ku guulaysatay wax ka qabashada dhinacyada ku saabsan geedi socodka shirka ay ku jiraan design PCB, qaybaha, Jinka Alxan, soo qaado iyo meelaynta, reflow, Stencil iyo kormeerka. Our 20+ waayo-aragnimo sano caawiya noo soo koobaan in marka la eego arrimaha post-reflow, iyadoo qaybaha noocyada kale ee baakadaha la barbar dhigo, qaybaha soo baakadeeyey la 01005 qabtaan fiican in tirtiridda arrinta sida kabidda, Taalladaas, ku laayeen-taagan, ka yeellay-down, qayb ka maqan iwm
Waxaan awood u taabato noocyada kala duwan ee baakadaha ee geedi socodka shirka PCB iyo marinka kor ku guuldareysto inuu soo bandhigo oo dhan. Haddii foomka xirmo ka kooban aad looga baahan yahay ma aha kor ku xusan, fadlan ha ka waaban inaad nala soo gaaraan at wonderful@wonderfulpcb.com for awoodaha maaraysay xirmo our balaariyay.